Kooxda Everton Oo si Mustafaysan lacag ku abaalmarinaysa xiddigeeda Barkley
HomeWararka MaantaKooxda Everton Oo si Mustafaysan lacag ku abaalmarinaysa xiddigeeda Barkley
Iyda ay jiraan dalabyo xoogan oo u imaanaya da,yarka reer England iyo kooxda Everton Ross Barkley ayaa hadana waxaa bar-bar socda heshiis kordhin loo samayn doono xiddigan iyada oo wali loo balan qaaday in uu helo doono mushahar dheeri ah si uu u sii joogo Goodison Park.
Goal.com ayaa waxaa ay leedahay kooxda Manchester United ayaa ah kooxda kaliya oo ilaa haatan daba taagan xiddigan waxaana 20-jirkan uu bandhig la yaab leh ku soo qaatay kooxda xilli ciyaareedkii dhamaaday ee 2013/14 isaga oo dhaliyay lix gool waxaana uu ka mid ahaa da’yartii ugu fiicnayd xagaagan Premier League.
Macalinka kooxda Everton Roberto Martinez ayaa waxaa uu si cad u sheegay inaanu kooxda iibin doonin xiddigaha muhiimka u ah sida Ross Barkley isaga oo intaa ku daray in ay socdaan wada hadalo hoose oo heshiiska loogu kordhinaayo xiddigan.
Barkley ayaa haatan qaata mushahar dhan £20,000-toddobaadkii waxaana laga yaabaa in loo laba jibaaro oo looga dhigo £40,000-todobaakii laakiin waa marka uu qalinka ku duugu heshiiska cusub. Xiddigan ayaa ka mid ah xiddigaha xulka saddexda libaax ee ugu qayb galaysa koobka aduunla ee uu magacaabay Roy Hodgson.